ဒီညတော့ ပေါ့ပေါ့ ပါးပါး Diet ညစာလုပ်စားတယ်။ ပိန်ချင် လှချင် သူ မမ/ညီမတို့အတွက် သိပ်ကောင်းတဲ့ အစားအစာ တခုပဲနော်!!! Snacks လိုပဲစားစား Main Dish လိုပဲစားစား ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အပြင် လုပ်ရလဲလွယ်တယ်၊
Tonight, I madeadiet dinner. Healthy, Easy & ofcourse Yummy!!! Plus, the ingredients can be added to your likeness. Okie, let's see how to make spring rolls & sauce.
Ingredients (for spring rolls)
Roasted chicken or boiled chicken
salad leaves, rocket leaves, basil leaves
Ingredients for the spring roll
1. Cut, clean and arrange the vegetables as per above picture.
2. Put the water inside the wide open 1 or2inches deep plate which diameter is bigger than the rice paper.
3. Place the rice paper into the water and let the face touch the water evenly. Turn the other side and do the same.
4. Then, place the wet rice paper on the plate. Add the above ingredients as your likeness.
5. Make it tight and roll the rice paper slowly.
6. You can keep as you rolled or you can cut as your preference.
Roasted Sesame sauce (you can buy at the japanese grocery store)
1. In the blender, blend place all the ingredients and blend them well.(for orange, squeeze the juice)
2. Poured in the bowl & sprinkler the chopped coriander.
Voila! Serve yourself .. fresh spring rolls
Takeaspring roll and dip into the sauce and give itabite. Hmmm ....... so yummy :-)
Posted by Greeny at 11:30 PM2comments:
Labels: GreeNy's Kitchen
Spirelli Pasta in pesto sauce & Salmon lemon zest
Spirelli Pasta လေးကို ဆားလေးထည့် ၇ မိနစ်လောက်ပြုတ်ပြီး ရေစစ်။
ready made Pesto sauce လေးနဲ့နယ်။
Salmon ငါးကို ဒယ်ပြားထဲမှာ olive oil နဲနဲထည့်ကြော်ပြီး ငုတ်ကောင်းမှုတ် နဲ့ lemon zest လေးဖြူး။
Posted by Greeny at 11:07 AM No comments:
ဘရာဇီးဆိုရင် နာမည်ကြီး ဘောလုံးအသင်းအနေနဲ့ သိကြပါတယ်။ တောင်အမေရိတိုက်ကြီးတခုလုံးရဲ့ 
၂၀၁၃ ခုနှစ်ထဲမှာ ၃လ တကြိမ်လောက်ကို ခရီးထွက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ Holidays trips တွေနဲ့ Company trip တခု အပါအ၀င်ပေါ့။ ဘရာဇီးနိုင်ငံကိုတော့ ၂၀၁၃ အကုန် ဒီဇင်ဘာလက ၂ ပတ် အလည်သွားခဲ့တာပါ။ ၆လလောက် ကြို ပြီးလက်မှတ်ဝယ်ထားတော့ ယူရို ၃၀၀ လောက်သက်သာခဲ့တယ်။ ခါတိုင်းခရီးသွားရင်တော့ Camera အကြီးယူသွားနေကြပေမယ့် ဘရာဇီးမှာတော့ Crime rate ကြီးမားတယ်လို့ နာမည်ကြီးတာရယ် Internet မှာ Info ရှာကြည့်တော့လဲ မှန်နေတာကြောင့်နောက်ဆုံး ထားခဲ့ရတော့တယ်။ iphone လေးနဲပဲရိုက်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေပါ။
(ဒီခရီးသွားပိုစ့်တွေက မရောက်ဖူးသေးတဲ့ ကိုယ့်မြန်မာလူမျိူးတွေအတွက် ဗဟုသုတရရှိစေဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်)
ပထမဆုံးသွားခဲ့တာက Iguazu Falls (Iguazu ရေတံခွန်စုများ) ဖြစ်ပါတယ်။ Iguazu River ရဲ့ ရေတ ခွန်စုများဖြစ်ကြပြီး Argentina နဲ့ Brasil နိုင်ငံတို့ရဲ့  ကြား border line ပေါ်မှာတည်ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် Iguazu Falls ကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် Argentina side နဲ့ Brasil side ကဆိုပြီး ၂ ဖက်လုံးကကြည့်လို့ ရတယ်။ လေ့လာဖတ်ရှုမှုတွေအရတော့ Argentina ဖက်ကကြည်ရ့တာ ပိုလှတယ်လို့မှတ်သားရ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲ မြန်မာပတ်ပို့စ်ပဲကိုင်ထားသေးတဲ့ ကျမတွက်ကတော့ brasil visa တခုနဲ့ကို အချိန်ကုန် အလုပ်ရှုပ် (အဲဒီတုန်းက အလုပ်လဲလုပ်နေသေးတော့) လှပါပြီ။ Iguazu Falls ဆိုပြီး s ထည့်ခေါ်ရတာက သူဟာရေတံခွန်ပေါင်း ၂၇၅ လောက်ခွဲဖြာစီးဆင်းနေလို့ပါ။ Brasil ဖက်ကဆိုရင် Iguazu National park ထဲကနေလှည့်လည်ကြည့်ရှုရတာပါ။ Iguazu Falls ကိုမြင်္ငပြီးနောက် အမေရိကားက Nigara Fall ကို သနားစရာ Nigara "Poor Nigara" လို့ အမေရိကန် First Lady Eleanor Roosevelt ကပြောတယ်လို့ wiki မှာဖတ်ရပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အသေးစိတ်သိချင်ရင်တော့ wiki ခေါက်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Iguazu River taken from plane
Iguazu River and Falls taken from the plane
Magazine ထဲက Iguazu အပေါ်စီးကရိုက်ထားတဲ့ပုံ
The Bridge for the visitors to visit more near to the falls
Other small splitting falls of the Iguazu
Close up to the big fall
Iguazu National Park plan to imagine how the main falls flows and the visitors area to visit the falls
Parrot ကြက်တူရွေး from Iguazu bird park which I had visited the other day
Look!!! what I found in Iguazu citry street side? စကားဝါပင်
If you visiting brasil, what you don't have to miss out is the famous brasilien grilled meat buffet. The waiters come to your table and slice the meats on your plate which are different parts of the cow while salads, pasta, bread and dessert are pick up as your like. The meat are marinated with spices and grilledalong time with the skewer on the charcoal fire till they are soft and tender.
A waiter slicing the meat
Another waiter with another different part of the meat
The kitchen where the meat parts are grilled
The best part for me in brasil is the brasilien drink alot of fresh fruits juice. In every corner of the street, you will findajuice shop. No sugar added pure juice, thumbs up!!!
Pineapple Juice, we tookajudge ^-^
To be continue (ဆက်ရန်)
Posted by Greeny at 3:05 PM No comments:
I like homemade foods and I <3 cooking.
Cooking became one of my hobby starting from the last4years ago. After2years of eating food court foods in Singapore, I started to cook home cooked meal sometimes with my own version. But the hobby getting stronger only after I arrived in France. Needless to say that in France, eating out is costly for daily basic.In general, people used to cooked at home and in weekend might eat out for onceaweek.
Ok, let's see what I made today ...avery quick one ;)
Chicken with Potato, Carrot & Cauliflower
The Indian curry powder
The secret of the time saving quick version is the indian curry powder. Voila .... yummy tummy!!!
Posted by Greeny at 10:52 PM 1 comment:
ပြင်သစ်နိ်ုင်ငံ ရဲ့ နွေဦးရာသီ (Spring) နဲ့ နွေရာသီ (Summer) မှာ ပန်းလေးတွေ အရောင်စုံ အသွေးစုံ နဲ့ အမျိူးစုံ လင်စွာ ဖူးပွင့်ကြပြီး အရမ်းအရမ်း ကိုလှပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ အလင်းရောင် နဲ့ နေ ကို မြင်တွေ့ ကြရလို့ လူတွေ စိတ်လက်ပေါ့ပါးပျော်ကြတဲ့ အချိန်ကာလပေါ့။ အလင်းရောင်တွေ နေတွေ ခွဲပြောရတာက ဆောင်းတွင်း သုံးလေးလလုံး အမှောင်ထဲမှာနိုး အမှောင်ထဲမှာ အလုပ်သွား အမှောင်ထဲမှာပြန်လာ လူတွေဟာ စိတ်ဓါတ်ကျ (Depression) ပြီး မပျော်ရွှင်ကြပါဘူးလို့ လေ့လာသုံးသပ်မှုတွေက ဆိုပါတယ်။ နွေဦး (Spring) နဲ့ ဆောင်းဦး (Fall) တို့မှာတော့ မိုးလင်းရင် အလင်းရောင်ရပေမယ့် နေသာတလှည့် မိုးအုံ့ မိုးရွာ တလှည့်စီမို့ သိပ်အစိုးမရလှပါဘူး။ နွေရာသီ နှစ်လ သုံးလလောက်ပဲ နေ့တိုင်း နေသာပြီး အပူချိန်မြင့်ပါတယ်။ ပူမယ့်ပူတော့လဲ စင်ကာပူအပူချိန် နီးပါး ရှိပြီး ပြင်သစ်နိ်ုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဆို တခါတလေ ၄၀ ဒီဂရီလောက်ထိရောက်သွားတတ်လို့ အစိုးရက ရေများများသောက်ဖို့ အပြင်ထွက်ရင် ထီး ဦးထုပ်ဆောင်းကြဖို့ ရေဒီယို TV တွေကနေကြေငြာရပါတယ်။
မြန်မာလိုအမြဲရေးချင်သော်လည်း မြန်မာလက်ကွက်မကျွမ်းကျင်ပါဘူး။ ဒီပို့စ်လေးပြီးဖို့ရာ အတော်လေးအချိန်ယူရ ပါတယ်။ ကြိုးစားပြီးတော့ မြန်မာလိုတခါတလေ ရေးပါ့မယ်။ အခုတော့ ပန်းလေးတွေရဲ့  ဓါတ်ပုံကိုဝေမျှလိုက် ပါတယ်။ ဒီပို့စ်မှာတင်တဲ့ပန်းတွေကတော့ ကျမနေတဲ့ Appartment compound ထဲကပါ။ ပန်းနာမည်တွေတော့ များသောအားဖြင့်မသိတဲ့အတွက် သိတဲသူများရှိရင်လဲ ကွန်မန့်မှာ ရေးသွားနိုင်ပါတယ်။
တပင်လုံး အရွက်မရှိတဲ့ အဝါရောင် ခြုံပုတ်လိုပန်း
ဒါနောက်တမျိုး အဝါရောင် သူ့ပွင့်ဖတ်လေးတွေက ဘောလုံးလိုပတ်ပတ်လည်
ဒါလေးကတော့ အလေ့ကျပေါက်တဲ့ mini wild flowers
နှင်းဆီအထပ် သေးသေးလေးနဲ့ တူတဲ့ပန်း
Posted by Greeny at 9:17 PM No comments:
Summer is in the air!!! But still in the spring season here and the sunny day is likeagold.
OK.. I'll let you enjoy the beauty of the grand Paris city.
Boat Ride in the Seine River
An art museum Le Petit Palais (small palace)
Les Invalides known as L'Hôtel national des Invalides (The National Residence of the Invalids)
Grand Palais အရှေ့မျက်နှာစာ
Grand Palais with the glass roof taken from far away
A restaurant inside the Grand palaise ..Nice to havealunch under the columns :)
Posted by Greeny at 3:54 PM 1 comment:
Last week of March till mid April 2014, I went back to my homeland. This time I had visited to Ngwe Saung beach, Inlay lake & my home town May Myo. I am sharing some pictures that I took on my trip.
Sunset in Ngwe Saung beach
BOB hotel private beach, Ngwe Saung
Sunset in Inlay lake
Dat taw Chaing Fall, A ni sakhan (Maymyo)
Ayetharyar wineyard, Taunggyi
Me Nu Oak-Kyaung, Inwwa
Posted by Greeny at 6:45 PM2comments:
GreeNy's Kitchen (3)
Fresh Vietnamese Chicken Spring Rolls & Orange-Pea...